Wararka Maanta: Arbaco, Sept 13, 2017-Kulanka Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta mar kale looga hadli doono arrinta Qalbi-Dhagax
C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi-dhagax), oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Jabhadda ONLF, ayaa dowladda Soomaaliya waxaa ay dhawaan ugacan-gelisay dowladda Ethiopia, waxaana arrintaasi ka dhalatay guux-siyaasadeed oo xooggan oo xildhibaannada ay ku kala qeyb-sameen.
Kulankii sabtidii lasoo dhaafay ee Baarlamaanka dowladda Federaalka Soomaaliya, oo looga hadli lahaa kiiska Qalbi-Dhagax ayaa u baaqday kooram la’aan, sida uu sheegay Jawaari.
Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa sheegay in lala xisaabtamayo Xildhibaannadii ka maqnaa fadhiga Baarlamaanka.
Kulankii sabtida waxaa soo xaadirtay 104 xildhibaan, waxaana jiray xildhibaanno yimid kulanka balse diiday in magacyadooda ay ku qoraan warqadda-xaadirinta xildhibaannada, taas oo ka dhigneyd in aysan raali ka aheyd joogitaanka fadhigii baarlamaanka ee maanta.
Dhiifanaan iyo dareen xooggan, ayaa la muujinayaa waxaana xildhibaannada ay yihiin kuwo ku kala qeybsan go'aankii xukuumadda.